မယ့်ကိုး: စောင့်ကြည့်နေသော မျက်ဝန်းများ
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 9/15/2012 01:15:00 AM
15/9/12 3:17 PM
16/9/12 4:40 AM
အေးချမ်း (သံလွင်) said...
အလည်လာရင်း စာကြွေးလေးတွေ ဖတ်သွားပါတယ်။ Cbox မတွေ့မိလို့ ဒီမှာပဲ ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ အားပေးလျက်ပါ...
16/9/12 12:43 PM
မန့်မလို့ ကွန်အခြေအနေစောင့်ရင်း ဟုမ္မလင်းမှာမီးလင်းလို့ ထပြေးရသေးတယ်ကွယ်
တဆိုင်တည်းသော နက်ဆိုင်ကလည်း မီးတွေပိတ်စက်တွေပိတ်လေ
လေးငါးအိမ်ကျော်က မုန့်ဖုတ်တဲ့ သလ္လာဦးစတိုးက ဂစ်အိုးပေါက်တာ ပြေးလွှားရသေးတယ်
အခုမှမန့်ဖြစ်တာ ဖတ်ဖြစ်ကြောင်းပါ မယ်ကိုးပို့စ်တွေက မြင့်တယ်
17/9/12 12:25 AM
ထိခိုက်နာကျင်ကြေကွဲစေတဲ့ စာတပုဒ်ပါပဲ။ တန်းတူ အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ စကားကို နယ်မှာ နေတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ ဘဝနဲ့ရင်းပြီးသိခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခလေးတိုင်းပျော်ရွှင်ပြီး ခလေးတွေရဲ့ အနာဂါတ်တွေလှပဖို့ ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေ များသည်ထက် များပြားလာပြီး ကြယ်ငါးလေးတွေ အရောင်လက်တောက်ပလာဖို့ ဆန္ဒပြုမိပါတယ်
17/9/12 10:02 AM
23/10/12 5:42 AM
kite runner would sound better with Sun lite thu စှနျလိုကျသူ
5/3/13 3:25 PM
Dear Maung Peace,
Thanks so much for your kind comment. I really forget this word. U r the best in Myanmar and English languages :D
5/3/13 5:45 PM